Madaxweynaha Mareykanka oo Safarkiisi ugu horeeyay ee Asia maanta kutagay dalka Kuuriyada Koofured. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Madaxweynaha Mareykanka oo Safarkiisi ugu horeeyay ee Asia maanta kutagay dalka Kuuriyada...
Maanta oo Jimce ah, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa safarkiisii ​​ugu horreeyay ee Aasiya ku tagay Kuuriyada Koonfureed, taasoo ujeeddadeedu tahay xaqiijinta go’aanka diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee maamulkiisa ee gobolka si looga hortago Shiinaha.
Booqashadan oo qaadan doonta shan maalmood, Biden waxa uu kulan madaxeedkiisii ​​ugu horreeyey la yeelan doona madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Seok-yeol oo ay ka wadahadli doonaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin barnaamijka Nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo khatarta silsiladda sahayda.
Booqashada Biden, oo ah tii ugu horeysay tan iyo markii uu xafiiska qabtay, ayaa ku soo beegantay iyadoo Seoul iyo Washington labaduba ay rumeysan yihiin in Kuuriyada Waqooyi ay qarka u saaran tahay tijaabinta gantaallada ballistic-ga ee Nukliyeerka ama qaaradaha isaga gudba inta uu ku sugan yahay Kuuriyada Koonfureed ama Japan, oo ah lugtii labaad ee safarkiisa.
Booqashada Biden ee Seoul ayaa timid 10 maalmood uun kadib markii Yoon uu xilka la wareegay.
Previous articleShil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka Magalaada Hargeysa.
Next articleMaamulka mudug ee galmudug iyo saraakisha amniga oo kulan deg deg ah ka yeeshay amniga galkacyo.